Mabhuku aReyes Monforte, kufamba kuburikidza nebasa remunyori weMadrid | Zvazvino Zvinyorwa
Reyes Monforte mabhuku
Kana mushandisi weInternet apinda mukutsvaga "Reyes Monforte mabhuku", mhedzisiro inowanzoenderana inoenderana Iyo burka yerudo (2007). Iri bhuku rakavakirwa pazviitiko chaizvo - senge angangoita ese magwaro nemunyori akaberekerwa muMadrid - rinotaura nyaya inofamba yezvepasi rose Hazvishamise kuti ino nhoroondo yakabudirira kuchinjirwa kune diki skrini neiyo Antena 3 chiteshi.
Pamusoro pezvo, mutori wenhau wekuSpain uye munyori akagashirawo Alfonso X Prize yeNoveli Nhoroondo ye Chido cheRussia (2015). Asati aburitsa bhuku rake rekutanga, Monforte aive chikamu chevadzidzi vezvirongwa zvakati wandei zvinofarirwa nevateereri veSpanish nevatariri.. Pakati peavo, El Mundo TV, Nyika Yakapenga (Onda Cero) uye, chokwadika, Mwedzi minomwe (Radio Point).
1 Dzimwe nhoroondo yehupenyu pamusoro paReyes Monforte
2 A burqa yerudo (2007)
2.1 Kutanga kwenyaya yechokwadi
3 Utsinye rudo (2008)
4 Chakavanzika Rose (2009)
5 Vasina kutendeka (2011)
6 Sand Sandes (2013)
7 Chido cheRussia (2015)
8 Mabhuku achangoburwa aReyes Monforte
Dzimwe nhoroondo yehupenyu pamusoro paReyes Monforte
Reyes Monforte (1975) akaberekerwa muMadrid, Spain, kwaanozivikanwa nebasa rake rekutapa. Akatanga basa rake muredhiyo chakasangana mukambani yaLuis del Olmo muchirongwa Protagonistas. Kubva ipapo Iye anga ari mugadziri uye director wemapurojekiti munzvimbo dzakasiyana siyana dzeredhiyo muIberian Peninsula.
Semutungamiriri wehurongwa hwemanheru hwa Mwedzi minomwe yakasimudzira vateereri vanokosha. Nezve basa reterevhizheni, Monforte Akave ari munyori wechinyorwa uye anotora chikamu mumasaiti senge Antena 3, TVE, La 2 uye Telemadrid, pakati pevamwe. Nhasi arikupa mupepanhau Chikonzero. Iwo mabhuku akagadzirwa nemutori wenhau weSpanish uye munyori zvinotsanangurwa pazasi:
Iyo burka yerudo (2007)
Iyo burqa yerudo.
Unogona kutenga bhuku pano: Iyo burqa yerudo
Kutanga kwenyaya yechokwadi
Iri zita rakavakirwa pazviitiko chaizvo zvakakomberedza mamiriro ekumanikidza aMaría Galera. Monforte akange adzidza nezvenyaya yenyaya iyi mudiki weMallorcan paakaverenga chinyorwa mupepanhau. Mushure mezvo, vakasangana naRosie (hanzvadzi yaMaria) uyo akabatsira kutsvaga protagonist kusvikira iye azokwanisa kutaura parunhare naye panguva yekuparadzirwa kwe Mwedzi minomwe.
Panyaya iyi, Monforte akazivisa mubvunzurudzo naJB Macgregor (2007):Takakwanisa kuwana Maria mumba muKabul maaigara nemurume wake, vana vake vaviri vadiki uye wechitatu aive munzira. Uye ipapo zvese zvakatanga. Kunyangwe kupera kwemaroto akararama María kwemakore mana ”.
Chaizvoizvo, ino novel inyaya yerudo. Izvo ndezve mukadzi wechidiki (María Galera) akadanana nemurume weAfghan muLondon. Manzwiro ake akasvika pakasimba zvekuti akafunga kumuroora, kutendeukira kuIslam, nekutevera murume wake kunyika yekuzvarwa. Ikoko, iye akamanikidza aigara pasi pemitemo yakaoma yehutongi hweTaliban.
Izvo zvakatipoteredza zvakanyanyisa kumutswa pakutanga kwehondo, sezvo iye aive akamisikidzwa pakati pegakava pasina kuzivikanwa kana mari. Nekudaro, lmamiriro ehupenyu asina kugadzikana haana kumutadzisa kuva nevana vaviri nemurume wake. Kunyangwe, aine mwana wechitatu munzira, María akafunga kukumbira rubatsiro ... Mumwe muzvinabhizimusi weMallorcan akatambanudza ruoko rwake uye nekudaro akakwanisa kurarama kuti ataure nezverwendo rwake runoshamisa.
Rudo rweutsinye (2008)
Unogona kutenga bhuku pano: Rudo rweutsinye
Nebhuku rake rechipiri, Monforte akaramba achiongorora madingindira ane chekuita nemhuri uye rudo mune yechokwadi kesi. Pane ino nguva, iya yemugari weValencian María José Carrascosa. Akaiswa mujeri kubva 2006 kusvika 2015 (gore raakaburitswa parole), akatongerwa makore gumi nemana mujeri nekuda kwekuzvidza nekutapa.
Carrascosa akafamba nemwanasikana wake kubva kuUSA kuenda kuSpain pasina mvumo kubva kuna baba vake, Peter Innes (mumhan'ari, mugari weUS). Zvichida, aive murume anoshusha uye anoshusha, izvo, María José akataura kuti haazombosiya chinangwa chake chekumuchengeta kubva pamusikana. Bhuku rinorondedzera mamiriro ezvinhu ane njodzi ekusungwa kwake uye ruzivo rwemaitiro ake epamutemo.
Rakavanzwa rose (2009)
Unogona kutenga bhuku pano: Rakavanzwa rose
Bhuku rechitatu raMonforte raitarisirwa zvakanyanya kupihwa manhamba ekunyora ezvakatangira mazita (anopfuura mazana mazana matatu emakopi akatengeswa pakati pezviviri). Rakavanzwa rose inotaura nyaya yechokwadi yaZehera, mupoteri wekuBosnia akasvika kuSpain mushure mekutiza hondo muBalkans. Zvisinei, hupenyu hwake papeninsula hausi nyore zvachose kunyangwe akasangana nematambudziko neushingi.
Kubva Zehera anofanirwa kushungurudzwa kubva kumafiyaas, vatengesi vevanhu, kufungira xenophobic uye vortex yekutsiva yakabatana nezvake zvekare. Atarisana nezvipingamupinyi zvine njodzi, anovimba nehukama nehanzvadzi yake. Saizvozvo, rudo rweshamwari yeSpain inomuponesa mune yakanyanyisa uye kunyepedzera kwerudo rutsva kwakakosha.
Vasina kutendeka (2011)
Unogona kutenga bhuku pano: Vasina kutendeka
Mubhuku rino mune mamwe madingindira akafanana ne Iyo burka yerudo. Ndokureva kuti, rondedzero yakavakirwa pazviitiko chaizvo, kupokana pakati pemukadzi wechiSpanish (Sara) neMuslim (Najib)… Saka, zviitiko zvinotora shanduko inokatyamadza kana protagonist (mudzidzisi) paanoona izvo zvinangwa zvemudzidzi waakadanana naye.
Muchokwadi, Najib ndeye jihadist yemukati yakavanda Al Qaeda sero. Nekudaro, anonyepedzera kunge akanyatsobatanidzwa muhupenyu hwekuMadokero kungokwezva vakadzi vanonetseka mutsika nemagariro echinamato. Zvichakadaro, Sara anoziva kunonoka kurangana kwaanga ave kuita uye anomanikidzwa kuita sarudzo dzakakomba.
Kutsvoda kwejecha (2013)
Unogona kutenga bhuku pano: Kutsvoda kwejecha
Kutsvoda kwejecha inyaya yakaiswa murenje reSahara yekumadokero uye inoitika muzvikamu zviviri. Parizvino pane Laia, musikana weSaharawi anga achigara mudunhu reSpain kwemakore mashoma. Kunyangwe achitarisa kune ramangwana nechido, anoviga zvakashata zvakapfuura zvinouya zvakaverengerwa mukoma wake Ahmed. Ndiani akaenda kupeninsula achida kuti adzokere.
Kune rimwe divi, Carlos - baba vaJulio, mukomana waLaia wechiSpain - akasangana nerudo rwake muDakhla (Mauritania). Akazviita apo iyo enclave yaive ichiri kunzi Villa Cisneros, pamberi pekupinda kwemauto eMoroccan (1975). Muchirevo ichi, Monforte anorondedzera tsika dzeSaharawi uye mamiriro evaHartanis (rudzi rwehuranda hwazvino hwakashungurudzwa nezviuru zvevechidiki veMauritania).
Chido cheRussia (2015)
Unogona kutenga bhuku pano: Chido cheRussia
Iri zita rinomiririra, kusvika parizvino, chinonyanya kukosha zvinyorwa zveReyes Monforte. Ndizvo nhoroondo yenhau dInotsanangudza rakanakisa basa rehunyanzvi uye iyo neuralgic nhoroondo yehupenyu muhupenyu hwemuimbi weMadrid Lina Codina (1897 - 1989). Aive mukadzi wekutanga uye museki wemukurumbira wepiyano weMoscow, muimbi, uye conductor Sergei S. Prokofiev (1891 - 1953).
Iyo rondedzero inoratidza yekutanga makore anofara emuchato weProkofiev muParis. Ikoko, vaviri vacho vakapuruzira mapendekete neakanyanya kugona kudzidza uye maartist enguva yavo (1930s). Ipapo Sergei akasarudza kudzokera nemhuri yake kuMoscow. Iko - kunyangwe pavakatambirwa nerukudzo pakutanga - hurumende yaStalin yakatanga kuvanetsa.
Nechokumugumo kweHondo Yenyika II, muchato wakadzikira nekuda kwekufambidzana kwaSergei naMira Mendelssohn. Mushure mekuparadzaniswa, akamhan'arwa zvisina mhosva nemakominisiti uye akatumirwa kugulag kusvika pakufa kwaStalin (1978). Saka, Chido cheRussia inyaya isinganzwisisike yerudo, kushungurudzika uye kupona kwemukadzi akasarudzika.
Mabhuku achangoburwa aReyes Monforte
Kubudirira kwekutengeserana uye kutsoropodza kwakanaka kwekunyora kwakagamuchirwa na Chido cheRussia ivo vakaburitsa tarisiro yakawanda kutenderedza kuburitswa kunotevera kwaMonforte, Ndangariro dzelavenda (2018). Zvirokwazvo, ino novel yakawana ruzhinji rweongororo dzakanaka pamwe nemamwe mazwi asina kugadzikana.
Pakupedzisira, game Postcards kubva kumabvazuva (2020) munyori-akaberekerwa muMadrid akadzoka musitayera nekuda kweiyi inoshamisa nyaya yakaiswa mu Musasa wevasungwa weNazi. Mumutambo, vatambi chaivo pamwe nevamwe vakaumbwa vanosangana kuti vagadzire tambo inorondedzera inorangarira zvinotyisa zveAuschwitz.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Reyes Monforte mabhuku
Najat El Hachmi, anokunda mubairo weNadal wekuti Ivo vachatida neMuvhuro
2. Edhisheni nhau muna Ndira. Nhema nhema